Kedu otu vidiyo vidiyo YouTube na-arụ ọrụ ga-esi arụ ọrụ? | Akụkọ akụrụngwa
Na Blumex, ọnwa ole na ole gara aga, anyị gwara gị na YouTube kpebiri ịhapụ echiche ya ma gbanwee ụzọ o si eche echiche site na ikwe ka ndị ọrụ nke ngwaọrụ mkpanaka na-egwu vidiyo na-enweghị njikọ Internetntanetị. Iwu nke ọrụ Google a ọnwa ole na ole gara aga bụ na ịnweghị ike ịchekwa vidiyo na ngwaọrụ ọ bụla, yabụ ọ manyere ngwa dịka McTube ka emelitere iji wepu ọrụ a nke YouTube nakweere ọtụtụ afọ mgbe nke a gasịrị: ịlele vidiyo na-enweghị njikọ intaneti ruo ụbọchị 2.
Ma ọ bụ nke ahụ, dị ka weebụ na-ekwu IheanachoD, Ndị mmekọ YouTube anatalarịrị email nke ndị otu YouTube na-agwa ha gbasara atụmatụ vidio ọhụụ a. Mgbe mwụchara, aga m ahapụ gị isi echiche nke otu esi arụ ọrụ ọhụụ a yana email n'onwe ya.
Isi ihe dị na vidiyo na-anọghị n'ịntanetị nke YouTube na-enye
Dịka ị ga-enwe ike ịhụ ma emechaa, YouTube emeela ka iwu nzuzo ya dị na vidiyo na-enye ndị ọrụ ohere ịlele vidiyo YouTube ọ bụla (belụsọ onye ọrụ anaghị anabata ya) na-enweghị njikọ fixedntanetị edoziri nke kachasị nke awa 48. Ka anyị lee ụfọdụ isi ihe na-adọrọ mmasị nke atụmatụ a nke ga-abata na ngwaọrụ mkpanaka na Nọvemba:
Enweta: Ọ ga-adị na ngwa ọ bụla YouTube nwere nsụgharị kachasị ọhụrụ nke a ga-ebido na Nọvemba.
Kedu vidiyo? Anyị nwere ike ịlele ụdị vidiyo ọ bụla belụsọ maka ọwa akwụ ụgwọ na vidiyo ndị anaghị arụ ọrụ a (ma ọ bụrụ na onye nwe ya chọrọ ya).
Kedu?: Nanị site na ịpị "Tinye na ngwaọrụ" anyị nwere ike ịnụ ụtọ vidiyo ọtụtụ oge ka anyị chọrọ maka awa 48.
Lee ị nwere email ahụ n'onwe ya:
Ezigbo onye ọlụlụ:
Anyị na-ede akwụkwọ iji kọọrọ gị maka atụmatụ ọhụrụ emere maka ịhapụ na Nọvemba nke metụtara ọdịnaya gị. Arụ ọrụ a bụ akụkụ nke mgbanwe na-aga n'ihu iji nye ndị ọrụ ohere ohere ịnụ ụtọ vidiyo na ọwa na mkpanaka YouTube. Arụ ọrụ na-apụ na ndị mmekọ niile enyere ma ị nwere ike iwepu ya ugbu a ma ọ bụrụ na ịchọrọ. N'okpuru ebe a bụ ozi ndị ọzọ gbasara arụmọrụ na ntuziaka ka ị ga-esi gbanyụọ ya.
N'ime ngwa YouTube, ndị ọrụ ga-enwe ike ịrụ ọrụ site na "tinye na ngwaọrụ" dị na vidiyo na listi ọkpụkpọ, iji kọwaa ụfọdụ ọdịnaya enwere ike ịlele maka obere oge mgbe njikọ Internetntanetị adịghị. Na nke a, ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ enwee njikọta nke njikọta, ha ka ga-enwe ike ịlele vidiyo ndị ha gbakwunyere na ngwaọrụ ha maka obere oge ruo 48 awa. Ọ bụrụ na ngwaọrụ ahụ anọghị n'ịntanetị ruo ihe karịrị awa 48, agaghị enwe ike ịhụ ọdịnaya ahụ na-anọghị n'ịntanetị ruo mgbe ngwaọrụ ahụ ga-ejikọtaghachi. Ozugbo ejikọrọ, windo na-anọghị n'ịntanetị na-enye ume ọhụrụ ma onye na-ekiri ya nwere ike ịhụ ọdịnaya ọzọ.
Kedu ka o si arụ ọrụ maka ndị na-ekiri ya?
Site na ibe nlele site na arụmọrụ "tinye na ngwaọrụ", ndị na - ekiri ihe ga - enwe ike ịpụta ụfọdụ ọdịnaya enwere ike ịlele maka obere oge mgbe ha na - enweghị njikọta. Site na oge onye ọrụ enweghịzị njikọta, ha ga-enwe ike ịlele vidiyo na listi ọkpụkpọ nke ha gbakwunyere na ngwaọrụ ha site na ịnweta vidiyo site na ngalaba "na ngwaọrụ".
Kedu ka o si arụ ọrụ maka ndị mmekọ: ndụmọdụ na ọnụ ọgụgụ?
Mgbasa ozi Google ga-agba ọsọ maka ọdịnaya ahụ, a ga-agbakwunye echiche ahụ na ọnụ ọgụgụ zuru ezu. Biko mara na usoro mgbasa ozi ndị ọzọ agaghị akwado, yana mgbazinye ma ọ bụ zụta vidiyo agaghị esonye na arụmọrụ a.
A na-arụ ọrụ niile. Ma ị nwere ike iwepu ya ugbu a.
Ozi ndị ọzọ - YouTube ga-enye gị ohere ịlele vidiyo na-anọghị n'ịntanetị site na Nọvemba
Isi mmalite - IheanachoD
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Kedu otu vidiyo vidiyo YouTube na-arụ ọrụ ga-esi arụ ọrụ?
Motorola, ihuenyo Moto X agbaala